प्रेम पत्र मेरी उनीलाई... म बुद्ध बन्न चाहन्छु । - Lekhapadhee
प्रेम पत्र मेरी उनीलाई… म बुद्ध बन्न चाहन्छु ।
लेखापढी ३० चैत्र २०७६, आईतवार १३:१२
आखिर आज पर्खाइको त्यो लामो समय सकिदैछ। म आफैमा खुशि महसुस गर्दैछु, तिमी सँग हुने भेटको उत्सुकता र त्यसपछि का ति पलहरु…
ऒहो !! कल्पना गर्दै दंग परिरहेको छु या भनौ कति धेरै सपना सजाएको छु जुन तिमि संगै सुख दु:ख ब्यतित गर्नेछु।
हेरन् प्रिय गत साल पनि यस्तै बेला तिमि सँग भेट भएको थियो र त्यति बेला पनि कति धेरै कुराहरु गरे, तिमि सँग कति धेरै बाचा बन्धन गरे अनि तिमिलाई साक्षि राखेर मैले मेरा घर-परिवार, भाइ-बहिनि र अन्य धेरै सँग ति सबैका चाहना पुरा गर्ने कसम पनि खाएको थिए… मैले एक्लै ति सपना पुरा गर्न पनि सक्दैन थिए यदी तिमिले यसरि मेरो दु:ख- सुखमा म संगै नभएको भए। आज मलाई धेरै खुशी पनि लागेको छ, तिम्रो अटुट साथले गर्दा मैले मेरा चाहना र ति बाचाहरु पुरा गर्न सफल भए, तिमि कति महान छौ तिमीले धैर्य भएर हरपल मेरो साथ दियौ ।
कहिलेकाही तिमिसँग मेरो गुनासो पनि हुन्छ र मनमनै तिमिलाई गाली गर्ने गर्छु, अनि के के मनपरी बोली दिन्थे। जति बेला तिमी उग्र रुपमा आउथ्यौ, मेरो शरीरबाट चिटचिट पसिना निस्किन्थ्यो म काम गर्न सक्दैनथे, आलस्य लाग्थ्यो र केहि समयमै तिमि बर्षा बनि आउदा शितल त हुन्थ्यो नि तर सँगै रिस पनि उठथ्यो…किनभने मेरो सानो घरको छाना चुहिएर हैरान पर्थे, हामी निर्थ्रूक्क भिज्थ्यौ तर पनि खेती किसानी गर्नु पर्ने भएर होला बाध्यताबस झरी परेको सहन्थे ।
अनि तिम्रो त्यो अर्को रुप छ नि बिघ्न ठुलो हावा-हुरी बनि आउने, ऒहो कस्तो डरलाग्दो रुप तिम्रो ! तिमीलाई पनि बस्नु पर्ने भएर होला धन्न यो पाली मेरो घरको छाना लगेर गएनौ ।
कुनै बेला म बिरामी पनि भए। तिमिलाई थाहा छैन होला त्यो पुष-माघको चिसो याममा मलाई कति गाह्राे हुन्थ्यो, सानो छदा निमोनिया भएको थियो रे… मेरो मुवाले भनेको याद छ। अनी त्यो चिसोले गर्दा अहिले पनि रुघा- खोकी लागेर हैरान हुन्छु र डर लागेको थियो फेरी निमोनिया पो हुन्छ कि भनेर। तर मेरा कुलदेवताको कृपाले त्यस्तो केहि भएन।
जे होस म खुशी नै छु तिमीसँगको त्यो लुकामारी पुर्ण समयले। मैले धेरै कुरा सिके तिम्रो सामिप्यताले र सिधा अर्थमा भन्दा म भित्र अझ साहस र आत्मबिश्वास बढेको आभास भएको छ । अब फेरी पनि नयाँ बाचा कसमका साथ तिम्रो साथ पाउने छु र तिम्रो सफलता सँगै म पनि सफलताको ठुलो फडको मार्ने छु।
सुन न प्रिय, तिमीले मलाई यति धेरै साथ दियौ र त म खुशी छु, सफलताको को यात्रामा अनबरत अघी बढीरहेको छु ।
अनि अबको साथमा तिमीसँग महत्वपुर्ण बार्तालाप गर्नु छ मेरो देशको बारेमा।
अब यो पाली जसरि होस तिमीले हाम्रो मातृभूमिलाई पनि म जस्तै सफल बनाउने कोसिस गर्नु पर्नेछ । अती धेरै पिडा भयो जुन देशले भोगिरहेको छ अनि जसको असर हामी सबै नेपालीले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौ।
एक पटक तिम्रो बारेमा मैले कतै सुनेको थिए- तिमीमा एक अनौठो अद्रिश्य दैबी शक्ति पनि छ भन्ने, यदि त्यो सत्य हो भने हामी आपसमा मिलेर फेरी नेपाललाई पहिले जस्तै सुन्दर, शान्त र बिश्वकै समुन्नत रास्ट्र बनाउन तिर लागौ न। यो पाली जसरि भए पनि हामीले नेपाल बन्द- हड्ताल,हड्ताल र विभिन्न अपराधिक गतिबिधिमा रोक लगाउनु पर्छ है, बाचा गर न ।
हाम्रा नेपाली राजनैतिक नेताहरुलाई म भन्दा तिमिले बढि चिनेको बुझेको छु भनेर खुब धाक लगाउने गर्थ्यौ । हो अब यो पाली जसरि पनि ति नेताहरुको मन्द मगजमा सच्चा राष्ट्रप्रेम जगाइदेउ, बिकास, समृद्धिकाे सतबुद्धी भरिदेउ ।
मैले देखेको छु तिम्रो मनको पिडा जुन तिमीले पनि भोग्यौ, अब कति सहने गर न चमत्कार। तिमी त आफ्नो चक्रमा चलिरहेको छौ तर हाम्रो सुन्दर देश किन चल्न सक्दैन ? बिगत लामो समय भयो देश उल्टो दिशामा चलिरहेको छ। तिमि जस्तै समयको मूल्य बुझ्ने एक महान अभिभाबक खोजिदेउ प्रिय ।
बाचा गर न प्रिय, यो पाली फर्काइदेउ ति महान राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह जस्ता दुरदर्शी मानब फेरी मुलुक टुक्रा पार्नेहरु बढेका छन, देशको अंशबन्डा गर्न थाली सके… मिलेर बसेका नेपाली दाजुभाई लडाउन थालिसके… अनि जंग बहादुर र अमर सिंह जस्ता महान शहिद लाइ फेरी फर्काइ देउ हाम्रा सीमाका जंगे पिल्लरहरु भारतले दिनहु निल्दै गएको छ।
दु:ख लागेको छ, तातो रगत उम्लिएको छ प्रिय, हाम्रो लिपुलेक र कालापानि जस्ता सामरिक महत्त्वका क्षेत्र नक्साबाट हरायो। हिंसा नहोस म बाट… गौतम बुद्ध बन्न चाहन्छु ।
उफ्फ… लेख्दा लेख्दै बिर्सेंछु… तिम्रो लागि उपहार किन्न जानुछ। हतार भैसक्यो अनी तयारी गर्नु पर्यो नि तिमिलाई भेट्न।
भोली तिमी लाई भेटेरै तिम्रो न्यानो अङगालोमै रहेर बाँकी कुरा गरौला नि है मेरो प्यारो नयाँ बर्ष २०७७….
उही तिम्रो डि. चन्द ठकुरी
“चौतर्फी सुख-शान्ती छाओस, हरेक पाइलाहरुमा सफलताले फड्को मारोस, हजुरहरुमा नब बर्ष २०७७ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।”